Somaliland: Guddiga Ka Soo Kabashada Abaaraha Xagay Wax Marayaan Balse Lacagtii Maxay Ku Qabtaan ? - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Guddiga Ka Soo Kabashada Abaaraha Xagay Wax Marayaan Balse Lacagtii Maxay...
Guddiga ka soo kabasahada Abaaraha ee 18-ka May ee Somaliland, ayaa Shalay kulan ku yeeshay Xarunta Madaxtooyada ee Hargeysa.
Kulankan oo uu Guddoominayey Wasiirka Wasaaradda Madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi oo ah Guddoomiyaha Guddigaasi, ayaa muddadii uu socday waxa lagaga hadlay arrimo doora oo la xidhiidha hawlihii Madaxweynuhu u igmaday ee taakulada ka soo kabashada abaaraha, waxaana warbixino laga dhegeystay qaybaha guddidu ka kooban tahay oo shaqooyin muhiima qabtay muddo gaabana ku soo ururiyey lacag muhiima oo dhan 3,281,940.55.
Markii shirkaasi soo dhammaadayna waxay guddidu isla garatay in la dardar geliyo sidii qayb libaax ay uga ciyaari lahaayeen shacbiga Somaliland tabarucaadka loo ururinayo dadka ku caydhoobay abaarta iyo qorshaha danbe ee Xukuumaddu u dejisay in lagaga diyaar garoobo abaaraha noocan oo kale ah, lana abuuro shan maxsuul oo la rabo in xal loogu helo abaarahaas, kuwaas oo kala ah:
In la taakuleeyo laguna celiyo 20,000 oo qoys oo ka barakacay deegaanadoodii.
3.In la qodo 25 ceel biyood oo dhaadheer iyo 18 balli oo waa weyn la sameeyo lagana qodayo meelaha baahida biyaha ee ugu darrani ka jirtaan.
In 3,500 oo beero ah la sameeyo 12ka bilood ee soo socda.
In la xidho 12 seere oo keyd u noqda xoolaha wakhtiyada abaartu jirto.
waxaanay guddidu bulshada is xilqaantay ee sida weyn u muujiyey dareenkooda waddanimo kula dardaarmeen in ay sida ugu dhakhsaha badan u soo bixiyeen lacagihii iyo xoolihii ay isku qoreen maadaama oo wakhtigu is gurayo.
Sidoo kale, waxay guddidu u mahadnaqaysaa dhammaan warbaahinta kala duwan ee sida wanaagsan uga qayb qaatay baahinta iyo tebinta arrinta tabbarucaadka gaar ahaan Tv-yada wakhtigooda qaaliga ah u huray inay dadkooda uga faa’iideeyaan qayb ka mida saacadahooda shaqo iyo idaacadaha Radio Hargeysa iyo Fm ta Quraanka Kariimka ah oo iyagu laga bilaabo beri afarta ilaa lixda ku soo biirin doona dedaalkoodi hore ee qaadhaan ururintaas.
Ugu danbayntiina waxa shirkaasi lagu go’aamiyey in dalal Kuwait iyo Imaaraadka loo diro xubno ka mida guddida, kuwaas oo la kulmi doona jaaliyadaha reer Somaliland ee ku sugan halkaas iyo masuuliyiinta dalalkaas iyo in dhallinyarada is xilqaantay ee tabbarucaadka ku mari doona meheradaha iyo suuqyada waa weyn ee magaalooyinka dalka lala shaqeeyo oo qof walba uu soo dhaweeyo qaybna ka noqdo qaadhaan ururintaasi marka ay bilaabaan da’yartaasi hawshaasi. Iyagoo shacbiga kula dardaarmay guddidu in aanay marnaba ka caajisin qaadhan bixinta dib loogu taakulaynayo dadkeena, haday tahay dadka ku sugan gudaha dalka iyo kuwa debedaba, iyadoo rayul caamkuna la dhacsan yahay sida aynu dhexdeena wax isu tarnay inagoo horrena caan ugu ahayn arrimo badan oo aan caalamka intiisa kale ka hirgelin ama aan hore loogu arag.”